चर्चा सन्दीप लामिछानेको ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
चर्चा सन्दीप लामिछानेको !
काठमाडौँ, ३० वैशाख, नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले शनिबार इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा डेब्यु गरेका छन् । दिल्ली डेयडिभल्ससँग अनुबन्धित उनले पहिलो पटक आइपीएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंङ्लोर विरुद्ध खेल्ने अवसर पाए । आइपीएल खेल्ने सन्दीप पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन् ।
सन्दीप आइपीएलमा अनुबन्धित भएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ । उनले आइपीएलमा खेल्न पाउने कुराले नेपाली क्रिकेट फ्यानहरु निक्कै हर्षित थिए । तर सन्दीपलाई लामो समय बेञ्चमा देख्दा नेपाली फ्यान निराश थिए । तर शनिबार उनले डेब्यू गर्ने अवसर पाए यसबाट नेपाली फ्यान खुसी भए ।
सोही दिन दुई दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सन्दीपको नाम लिए । मोदीले नेपाल र भारतका जनता खेलको माध्यमबाट पनि जोडिएको भन्दै क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने आइपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
यता इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) ले पनि ट्वीटरमार्फत सन्दीपलाई बधाई दिएको छ । आइसीसीले नेपालबाट आइपीएल खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेकोमा सन्दीपलाई बधाई भन्दै ट्वीट गरेको छ ।
यसैगरी नेपाली कलाकार, राजनीतिकर्मी लगायतले पनि सन्दीपप्रति गर्वको अनुभूति गर्दै बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । नेपाल र नेपालीको शान बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत उनको चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा र नेपाली फ्यानमा जति नै चर्चा भए पनि दिल्ली डेयरडिभल्सले अन्तिममा आएर मात्रै सन्दीपलाई डेब्यु गराएको छ । म्याचको ११ खेलमा मात्रै सन्दीपलाई खेल्ने अवसर दिइएको हो । ११ म्याच खेल्दा दिल्लीले जम्मा ३ खेल जितेको छ । अंक तालिकामा पनि दिल्ली अन्तिममा छ भने समूह चरणबाट पनि बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ ।
सन्दीपले आइपीएल खेल्न पाउनु नै गर्वको कुरा हो । क्रिकेटमा सर्वाधिक चर्चाको म्याच बनेको आइपीएल अहिले विश्वका क्रिकेट खेलाडी र फ्यानहरुको चासोको विषय बनिरहेको बेला सन्दीपले सहभागिता पाउनुमा नै खुसी मान्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०७५, आईतवार ०८:३६ 2018-05-13 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged आइपीएल क्रिकेट सन्दीप लामिछाने
वर्ष २०७४ क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता !
१ बैशाख २०७५, शनिबार १८:२९ 2018-04-16
त्रिभुवन आर्मी क्लब समूह विजेता
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:३५ 2018-06-06
बेल्जियम र ट्युनिसियाको खेलमा गोलको वर्षा, बेल्जियम ५ गोल गर्दै विजयी
९ असार २०७५, शनिबार २०:०० 2018-06-23
Tags: आइपीएल, क्रिकेट, सन्दीप लामिछाने